Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao farany momba ny Hawaii » Kanto ny Masoandro Hawaii fa tsy ny tsara indrindra?
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Gresy • Vaovao farany momba ny Hawaii • Hospitality Industry • Vaovao farany momba ny Indonezia • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny fandinihana dia nijery ny isan'ny lahatsoratra fitsangatsanganana sy bilaogy izay manolotra ny toerana halehany, ny isan'ny lahatsoratra Instagram ary ny haavon'ny fandotoana ateraky ny hazavana artifisialy.
Ny fandalinana vaovao dia manambara ny toerana tsara indrindra amin'ny filentehan'ny masoandro manerantany.
Betsaka ny masoandro mody tsara indrindra any Etazonia no hita any Hawaii.
Ny nosy izay niavaka kokoa noho ny an'ny rehetra dia ny nosy grika Santorini.
Miaraka amin'ny fanalefahana miadana miadana ny fivezivezena amin'ny fitsangatsanganana, ny fikarohana vaovao dia manambara ny toerana tsara indrindra amin'ny filentehan'ny masoandro manerantany ary Hawaii no toerana faha-3 tsara indrindra.
Ny fandinihana dia nijery ny isan'ny lahatsoratra fitsangatsanganana sy bilaogy izay manoro ny toerana halehany, ny isan'ireo lahatsoratra Instagram ary ny haavon'ny fandotoana ateraky ny hazavana artifisialy any amin'ny faritra tsirairay mba hanomezana azy ireo isa filentehan'ny masoandro amin'ny 10.
Toerana 10 tsara indrindra ho an'ny filentehan'ny masoandro sy ny fiposahan'ny masoandro
laharana Destination Firenena Isan'ny lahatsoratra / bilaogy Sunset Instagram Lahatsoratra Lahatsoratra Sunrise Instagram Fampidirana ny masoandro sy ny fiposahan'ny masoandro Instagram Famirapiratana (mcd / m2) Filentehan'ny masoandro
1 Santorini Gresy 12 105,692 2,417 108,109 0.627 8.29
2 Bali Indonezia 5 154,376 20,590 174,966 0.216 7.13
3 Hawaii Etazonia 5 113,666 20,869 134,535 0.179 6.62
4 Rio de Janeiro Brezila 4 231,193 2,874 234,067 9.62 5.70
5 Grand Canyon National Park Etazonia 7 8,163 3,319 11,482 0.173 5.65
6 Angkor Wat Kambodza 6 1,960 21,943 23,903 0.268 5.49
9 Haleakalā Etazonia 4 10,086 33,049 43,135 0.175 5.15
10 Uluru Aostralia 4 16,676 9,056 25,732 0.172 4.93
Ny toerana niavaka indrindra dia ny nosy grika Santorini, izay heverin'ny maro ho nosy kely tsara indrindra amin'ny firenena, fantatra amin'ny hantsam-bato avo sy trano miloko fotsy eo amoron'ny Ranomasina Aegean.
Santorini dia notoroana hevitra tamin'ny lahatsoratra betsaka lavitra noho ireo toeran-kafa nitodihanay fa tsy mijaly noho ny fandotoana maivana toa ny tanàna lehibe, miaraka amin'ny famirapiratan'ny 0.627 mcd / m2.
Ny tanjona faharoa tsara indrindra ho an'ny lanitra filentehan'ny masoandro dia i Bali any Indonezia. Bali dia manana morontsiraka maro manamorona ny morontsiraka andrefana toa ny Jimbaran Beach izay ahafahanao mijery ny masoandro milentika amin'ny fisotroana na manaikitra ny hanina ao amin'ny iray amin'ireo bar sy trano fisakafoanana amoron-dranomasina rehefa milentika ao ambadiky ny ranomasina ny masoandro.
Betsaka ny masoandro mody tsara indrindra any Etazonia no hita ao Hawaii, ao anatin'izany ny valan-javaboary Haleakalā, fa ny Aloha Ny fanjakana koa dia misy ny morontsiraka tsara indrindra eto an-tany koa ary tonga amin'ny laharana fahatelo amin'ny fikarohana. Ny fasika fotsy manjelanjelatra toa ny moron'ny Kohala dia tonga lafatra amin'ny fijerena ny Ranomasimbe Pasifika mamirapiratra mavokely, mavo ary volomboasary.